Ukuze wenze insipho ekhaya, udinga izithako ezimbalwa zidayiswa okukhethekile ezitolo noma Pharmacy. Eyokuqala wabo - isisekelo insipho. Lula ukuthenga ngomumo eyenziwe, kodwa kungase kube ezivamile futhi singathathi hlangothi (umntwana) insipho ngaphandle ngamakha kanye izithasiselo, ngaphambili wagcoba kube grater. It is kahle zokuhamba le njongo, njengoba cishe akukho iphunga, ukuze ukunambitheka akhethiwe ngeke kusaba khona "lokuzivikela".
Soap isizinda futhi kungenziwa ngokuzimela, "hot" noma "abandayo" (non-abilayo amanzi okugeza) indlela. Nokho, le nqubo - kunalokho xaka futhi isikhathi, ngaphandle, akuphephile, njengoba isidingo ukubhekana amakhemikhali ezonakalisayo (alikhali). Ngaphezu kwalokho, base insipho, wenza kusuka ekuqaleni, uzolunga kuphela ngenyanga - kwesikhathi esithile kudingeka abavuthiwe (noma ube ukumelana ngenyanga ngaphambi kokusebenzisa insipho ngomumo eyenziwe, nazo zonke fillers). Ngakho-ke, umbuzo ukuthi ukupheka insipho ekhaya, abaningi mylovar abanolwazi ukuncoma Wabasaqalayo lesi sinyathelo futhi zisebenza womshini insipho kusuka ekuqaleni kamuva, ukuze uthole isipiliyoni.
Eyesibili isithako kuyadingeka insipho ekwenziweni - Base Amafutha. Kufanele libe ngaphandle iphunga eqinile: efanelekayo, isibonelo, alimondi, ulwandle lalesi sihlahla, ibhilikotsi, kakhukhunathi, zamapetshisi, ocolisekileyo noma umnqumo evamile. 100 g anensipho izisekelo zayo kumelwe uthathe 2 wezipuni. l. Ngaphezu kwalokho, idinga glycerol, Aromatics (amafutha abalulekile), izithasiselo futhi dyestuffs organic, amanzi noma infusions herbal (200 ml).
Ngaphambi indlela ukupheka insipho ekhaya, cabangela kanjani uyobheka futhi siyoba yini nephunga. Abantu abaningi ukuthenga isikhunta esikhethekile insipho - kulula kakhulu futhi emuhle. Nokho, ungakwazi uwathele e emathileyi plastic ezivamile, futhi ngemva ukupholisa Imi zibe tincetu. ngempumelelo ikakhulukazi lolu hlobo design ukuba izingqimba eziningana insipho.
Ukuze womshini insipho iresiphi siqu kufanele uqale ukuxoxa kwi amanzi base okugeza-uwoyela. Ngemva kwalokho, kancane kancane, in izingxenye ezincane, base insipho wanezela, kahle ukuxuba zonke bathulula ngezikhathi amanzi ashisayo noma ukumnika. Ingxube abakwazi ukuletha ukuze ngamathumba. Ngemva angathanda ukungaguquguquki kuya cream noma Batter, it esuswa ukushisa bese yengezwa glycerol isipuni akhethiwe kuphuma amafutha anephunga elimnandi kanye udayi. Ukuze multilayer insipho ingxube ihlukaniswe yaba izingxenye eziningana futhi ngamunye kubo engeza izithako ezahlukene. Ukwakheka yokugcina is batheleka isikhunta amancane emise noma ukuma ezinkulu, ngaphambili walala ucwecwe yayo (Ungasebenzisa futhi i kwetinhlobo letikhetsekile "a slicing", elula noma nge ebusweni okwenyanga). Uma formochka encane abacaphuni hhayi eyenziwe abicah, kufanele kube kancane amafutha - kuyoba lula ukususa kuyo insipho esiphelele. Ukukhuluma ngendlela ukupheka ekhaya insipho, insipho okwenza abanye abalandeli belulekwa ukuba afafaze ebusweni ngesimo utshwala ukususa Bubbles ebukekayo. Indlela efanayo Kunconywa kangcono izingqimba adhesion ekwenzeni insipho multi anemibala.
Labo abathanda indlela yokwenza insipho ekhaya, yasekuqaleni futhi okungajwayelekile, kungase kube ukuhlakanipha ukuze ungeze izithako yakhe yemvelo - ezifana juice noma uginindela zezithelo ezihlukahlukene. Very interesting iyona insipho ne emacembeni ezimbali ezintekenteke kanye namakhambi. Ukuze kuhlanzwe isikhumba kuhambisana kahle ngensipho khuhla emhlabathini oatmeal, imbewu poppy, uLwandle Lukasawoti futhi ikhofi zemvelo. Ukuze uthole ezihlukile kusetshenziswa odayi abanemibala - ngomumo uthenge esitolo noma ezenziwe ekhaya futhi zemvelo, isibonelo, umhluzi Hibiscus (abomvu), uwoyela ulwandle lalesi sihlahla noma isanqante juice (orange), liqhakaze (ophuzi), ikhukhamba ijusi noma parsley (enombala oluhlaza okotshani) t .. ngokuvamile, ephendula umbuzo mayelana nendlela ukupheka ekhaya kusuka kokuqendwa insipho lezisekelo, singabona inkimbinkimbi nekufinyelela ndlela ukwenza insipho sekuwumsebenzi wokuzilibazisa ozithandayo kwabaningi.
"Aflokrem": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa, Ukwakheka